Ikhosi yokuprinta i-3D isebenzisa iCura-Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi yokuprinta i-3D isebenzisa iCura
Le yikhosi yokwazisa kwizixhobo zeSolidWorks kunye nobuchule bokumodareyitha. Iya kukunika ukuqonda okuqinileyo kweSolidWorks kwaye iya kugubungela ukudala imizobo ye-2D kunye neemodeli ze-3D. Emva kwexesha, uya kufunda indlela yokuthumela ngaphandle kwifomathi yoshicilelo lwe-3D. Uya kufunda: Cura3D modelling yoshicilelo lwe-3d, ukufakwa kweCura kunye nokucwangciswa komatshini, iiFayile ezomeleleyo ukuthunyelwa ngaphandle kweefayili kwi-STL kunye nokuvula eCura, intshukumo kunye nokukhethwa kwemodeli, ukujikeleza kwemodeli kunye nokukala, ulawulo lokucofa ekunene kwimodeli, ukhetho lwe curation kunye neendlela zokubonisa, nokunye okuninzi.
Imodeli esisiseko kwiiSolidworks
Ukuthumela ngaphandle kwi-3D Printing
Ukucwangciswa koshicilelo lwe-3D kusetyenziswa iCura
Useto oluphambili lwe-3D
Iiplagi zoshicilelo lwe-3D eCura
Akukho mfuneko zokuqala
Abathandekayo kunye neengcali abafuna ukufunda iindlela zokuprinta ze-3D